Remote Working During Pandemics
Open Source • Jan 04, 2019
यो कठिन छ। पहिलो पल्ट केहि गर्दा सधै कठिन हुन्छ। बिशेष गरि जब तपाई योगदान गर्दै हुनुहुन्छ,गल्ति हुनु सहज कुरा हैन। हामी नया खुला स्रोत योगदानकर्ताले सिक्ने र योगदान गर्ने तरिका लाई सहज बनाउन चहन्थियेउम।
लेखहरू पढ्न र ट्यूटोरियलहरू हेर्न मद्दत गर्न सक्दछ, तर वास्तवमा एक अभ्यास वातावरणमा गरेर हेर्दा भन्दा के असल होला र। यो परियोजनाले निर्देशन प्रदान गर्न र शुरुआती शुरुवातहरूलाई उनीहरूको पहिलो योगदान प्रदान गर्ने तरिका सरल बनाउँदछ। यदि तपाईं आफ्नो पहिलो योगदान बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तलको चरणहरू पालना गर्नुहोस्।
यदि तपाईं कमांड रेखासँग सहज हुनुहुन्न भने, यहाँ GUI उपकरणहरू प्रयोग गरेर ट्यूटोरियलहरू छन्।
यो अन्य भाषाहरूमा पढ्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग तपाइँको मेशिनमा Git छैन, यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्.
यो भण्डार फोर्क गर्नुहोस
यस पृष्ठको शीर्षमा फोर्क बटनमा क्लिक गरेर यो रिपो फोर्क गर्नुहोस। यसले तपाईंको खातामा यस भण्डारको प्रतिलिपि सिर्जना गर्नेछ।
भण्डार क्लोन गर्नुहोस्
अब तपाइँको मेसिनमा फोर्क गरिएको रिपो क्लोन गर्नुहोस। तपाईंको GitHub खातामा जानुहोस्, फोर्क गरिएको रिपो खोल्नुहोस्, क्लोन बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि copy to clipboardआइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।
टर्मिनल खोल्नुहोस् र निम्न Git आदेश चलाउनुहोस्:
git clone "url तपाईंले भर्खरै प्रतिलिपि गर्नुभएको"
जहाँ "युआरएल तपाईंले भर्खरै प्रतिलिपि गर्नुभयो" (" चिन्हहरू बिना) यस भण्डारको url हो (यस परियोजनाको तपाईंको फोर्क)। Url प्राप्त गर्न अघिल्लो चरण हेर्नुहोस्।
जहाँ this-is-you तपाईंको GitHub प्रयोगकर्ता नाम हो। यहाँ तपाइँ GitHub मा तपाईंको कम्प्युटरमा पहिलो-योगदान भण्डारको सामग्री प्रतिलिपि गर्दै हुनुहुन्छ।
एक शाखा बनाउनुहोस्
तपाईंको कम्प्यूटरमा भण्डार गरिएको डाइरेक्टरीमा परिवर्तन गर्नुहोस् (यदि तपाईं पहिले नै हुनुहुन्न भने):
अब git checkout आदेश प्रयोग गरेर एउटा शाखा सिर्जना गर्नुहोस्:
git checkout -b <शाखाको-नाम>
git checkout -b add-milap-neupane
(शाखा को नाममा add शब्द को आवश्यकता छैन, तर यसमा एक उचित कुरा समावेश छ किनभने यस शाखाको उद्देश्य तपाईंको नामलाई सूचीमा थप्न हो।)
आवश्यक परिवर्तनहरू गर्नुहोस् र ती परिवर्तनहरू प्रतिबद्ध गर्नुहोस्
अब पाठ सम्पादकमा Contributors.md फाइल खोल्नुहोस्, यसलाई तपाईंको नाम थप्नुहोस्। फाइलको सुरुवात वा अन्त्यमा यसलाई जोड नगर्नुहोस्। यसलाई बीचमा राख्नुहोस्। अब, फाईल save गर्नुहोस्।
यदि तपाईं प्रोजेक्ट डाइरेक्टरीमा जानुहोस् र आदेश git status लाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भने,तपाइँ त्यहाँ परिवर्तनहरू देख्नुहुनेछ।
तपाईँले भर्खरै बनाएको शाखामा git add कमांड प्रयोग गरी ती परिवर्तनहरू थप्नुहोस्:
अब git commit आदेश प्रयोग गरेर ती परिवर्तनहरू प्रतिबद्ध गर्नुहोस्:
git commit -m "योगदान सूचीमा <तपाइको-नाम> थप गर्नुहोस्"
तपाईंको नामको साथ <तपाईंको-नाम> को स्थानान्तरण गर्नुहोस्।
GitHub मा परिवर्तन पुश गर्नुहोस
आदेश git push को प्रयोग गरेर आफ्नो परिवर्तन पुश गर्नुहोस्:
git push origin <शाखाको-नाम>
तपाईले पहिले सिर्जना गर्नुभएको शाखाको नामको साथ <शाखाको-नाम> को प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।
समीक्षाको लागि तपाईंको परिवर्तनहरू पेश गर्नुहोस्
यदि तपाईं GitHub मा तपाईंको भण्डारमा जानुहुन्छ भने, तपाइँ एक compare र pull request बटन देख्नुहुनेछ। त्यस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
अब pull request पेश गर्नुहोस्।
चाँडै म यस परियोजनाको मास्टर शाखामा तपाईका सबै परिवर्तनहरू मर्ज गर्नेछु। परिवर्तनहरू विलय भएपछि एक अधिसूचना इमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यहाँबाट कहाँ जानुहुन्छ?
बधाई छ! तपाईले _फर्क -> क्लोन -> सम्पादन -> PR_कार्यप्रवाह पूरा गर्नुभयो जुन तपाई प्राय: एक योगदानकर्ताको रूपमा सामना गर्नुहुनेछ!
तपाईंको योगदान मनाउनुहोस् र आफ्नो साथी र अनुयायीहरूसँग वेब अनुप्रयोग मा जानुहोस्।
तपाइँलाई कुनै पनि मद्दत चाहिन्छ वा कुनै प्रश्न छ भने तपाइँ हाम्रो स्लाक टोलीमा सामेल हुन सक्नुहुनेछ। स्लाक टोलीमा सामेल हुनुहोस्.
अब तपाईले अन्य परियोजनाहरूमा योगदान दिन सुरु गरौं। हामीले सुरू गर्न सक्नुहुने सजिलो समस्याहरूको साथमा परियोजनाहरूको सूची संकलन गरेको छ। जाँच गर्नुहोस् वेब अनुप्रयोगमा परियोजनाहरूको सूची।
Credit: Roshan Jossey
Eydean Blog © 2020 • Published with Ghost